Vichan Asia Travel & Tour, 47, Phra Athit Rd, Chana Songram, Phranakhong, Bangkok (2022)
หน้าหลัก > ประเทศไทย > Bangkok > สำนักงานตัวแทนจัดการท่องเที่ยว > Vichan Asia Travel & Tour
Back Home Backpackers Thailand
72/2 and 72/3 Samsen Rd. Soi 2
ထိုင်း မြန်မာခရီး သွားလာရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင် when you arrived to bangkok Just Make call Viber +66824693437
Photos from ထိုငျးမွနျမာငှလှေဲဝနျဆောငျမှု's post
ပိတျရကျမှာဝငျကွေးလညျးသကျသကျသာသာနဲ့နီးနီးနားနားလညျပတျခငျြတဲ့သူတှအေတှကျ Art In Paradise Bangkok
ဘနျကောကျကိုလာလညျမယျဆိုရငျ ထိုငျးနိုငျငံရဲ့ပထဆုံးဖွဈတဲ့3D Zone‌လေးကိုလညျးသှားဖွဈအောငျသှားဖို့တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
သူ့မှာ Zone ‌‌ခွောကျခုရှိပါတယျ...
1. AQUARIUM & SAFARI ZONE
2. CLASSIC ZONE
3. FANTASY ZONE
4. NATURE ZONE
5. MODERN ZONE
6. INTERACTIVE MEDIA ZONE
ကိုယျ့မကျြနှာအမူအရာထားတတျရငျထားတတျသလို သဘာဝကတြဲ့ပုံလှလှလေးတှရေမှာပါ။မထားတတျရငျလညျး နမူနာပုံစံရိုကျဖို့ ပုံလေးတှပွေထားပါတယျ။
အထဲမှာ စိတျဝငျစားစရာတှေ ဆှဲဆောငျမူ ကောငျးတဲ့ ART ‌တှေနေဲ့ပွညျ့နလေို့ ‌ရာကျခဲ့မယျဆိုရငျ သှားရောကျလညျပတျသငျ့တဲ့ ‌နရေတဈခုအဖွဈညှနျးပေးလိုကျပါတယျ။
Company Limited, 99 Esplanade Shopping Center
Room No. 408, Floor 4, Ratchadaphisek Road
Phone: 02-660-9130, 02-641-3016,
Asok ဘူတာကနေ Thailand Culture Center ‌ရောကျတဲ့အထိ MRT စီးလာပါ...
ထိုငျးမှာ အဓိကရှိထားရမညျ့ အရာက ဝေါ့ပါမဈပဲ မသိရငျကွညျ့ထားပါ
ထိုငျးမှာ အဓိကရှိထားရမညျ့ အရာက ဝေါ့ပါမဈပဲ မသိရငျကွညျ့ထားပါ Thai work permit
28/6/2021 ထိုင်းနိုင်ငံ၊အထူးသတင်း(၆)ခု 28/6/2021 ထိုင်းနိုင်ငံ၊အထူးသတင်း(၆)ခု1.ဒီနေ့ရောဂါကူးစက်မှုအခြေအနေ2.ထိုင်းနိုင်ငံ ရောဂါကူစက်မှုအများဆုံး ပြည်နယ်103...
l13/6/2021ဗစ်ကာကွယ်ဆေး လူတိုင်းထိုးနိုင်အောင် ထိုင်းအစိုးရစီစဉ်နေ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်နိုင်ရန
l13/6/2021ဗစ်ကာကွယ်ဆေး လူတိုင်းထိုးနိုင်အောင် ထိုင်းအစိုးရစီစဉ်နေ မြန်မာပြည်သို့ ပြန်နိုင်ရန 13/6/2021 တနင်္ဂနွေနေ့...ထိုင်း၊မြန်မာသတင်း (ကိုဦး၊ထိုင်းမြန်မာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု)1.ထိုင်းတွင်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လူတို.....
ဘန်ကောက်မှာ ကား၊ စမောင်းတော့မယ်ဆိုရင်၊ သိထားသင့်တာလေးများ
ဘန်ကောက်မှာ ကား၊ စမောင်းတော့မယ်ဆိုရင်၊ သိထားသင့်တာလေးများ ထိုငျးနိုငျငံ ဘနျကောကျ တှငျကားမောငျးမညျဆိုရလြှငျ သိထားရနျ အ‌ခွခေံအခကျြမြား
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF) သို့ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက်သတင်းကောင်း ရုပ်သံစဆုံး မေလ ၉ ရက်ေ
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF) သို့ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက်သတင်းကောင်း ရုပ်သံစဆုံး မေလ ၉ ရက်ေ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့(PDF) သို့ဝင်ရောက်လိုသူများအတွက်သတင်းကောင်း ရုပ်သံစဆုံး နှင့် မေလ ၉ ရက်နေ့  မြန်မာ့လ.....
27-4-2021 ညပိုငျး စိတျဝငျစားစရာ ထိုငျး၊မွနျမာသတငျးနှငျ့ နိုငျငံခွားသတငျးမြား
27-4-2021 ညပိုငျး စိတျဝငျစားစရာ ထိုငျး၊မွနျမာသတငျးနှငျ့ နိုငျငံခွားသတငျးမြား 27-4-2021 ညပိုင်း သတင်းကိုဦး ထိုင်းမြန်မာငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှု1).ထိုင်းတွင်ကိုဗစ်ကူးဆက်မှုပိုမိုမြန်တဲ့ဗိုင်းရပ်တွေ...
မွနျမာနိုငျငံသို့ ငှလှေဲရနျ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါသညျ။ Western Union မှ Wave Money သို့။
မွနျမာနိုငျငံသို့ ငှလှေဲရနျ ဝနျဆောငျမှုပေးနပေါသညျ။ Western Union မှ Wave Money သို့။ ထိုငျးနိုငျငံဘနျကောကျမွို့မှ မွနျမာနိုငျငံသို့ငှလှေဲရနျ မညျသညျ့နိုငျငံမှမဆို ပို့လာလို့ရပါသညျ။Western Union ဖွ....
ဘတျကတျချေါ ၊ ပနျးရောငျကတျကို မိမိဘာသာ စာရငျးတငျနိုငျရနျ လုပျပုံလုပျနညျး
ဘတျကတျချေါ ၊ ပနျးရောငျကတျကို မိမိဘာသာ စာရငျးတငျနိုငျရနျ လုပျပုံလုပျနညျး ဘတျကတျချေါ ၊ ပနျးရောငျကတျကို မိမိဘာသာ စာရငျးတငျနိုငျရနျ လုပျပုံလုပျနညျးလေးကို ကှနျပြူတာဖွငျ့ အလှယျတကူလုပ.....
ပတ်စပို့သက်တမ်း ၃၁.၄.၂၀၂၁ အထက်ရှိသူများ ဗီစာနောက်တစ်နှစ်ထပ်တိုးထားသင့်။
က‌မ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ အန်ကောဝတ် ဘုရားကျောင်းကလဲ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ ရှေ့ဟောင်း ဗိသုကာလက်ရာနှင့် သမိုင်းယဉ်ကျေးမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နေရာတစ်ခုပါ သွားဖို့စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ်။
တည်းဖို့၊စားဖို့၊သွားဖို့၊လာဖို့၊အိမ်ရှင်ကောင်းတစ်ယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်။ ကို‌မောင်မောင်က အန်ကောဝတ်ဘုရားကျောင်းနားမှာ ဟိုတယ်ဖွင့်ထားတြာကာပြီ အရမ်းစိတ်ထားကောင်းလို့ လာလည်ဘူးတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း ချီးမွမ်းခြင်းတွေနှင့်ပြည့်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။
အချက်အလက်အ ပြည့်အစုံကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းကနေသွားဖို့ ကျနော်ဝန်‌ဆောင်မူပေးပါတယ်။ Viber ဖုန်း +66824693437
Beyond Yangon Boutique Inn, Siem Reap, Angkor Wat, Cambodia!
မြို့ထဲမှာတည်ရှိတဲ့အတွက် pub street နဲ့ night market ကို ဟိုတယ်ကနေ5မိနစ် လမ်းလျှောက်သွားရုံပါပဲ။ Kings Road ကိုတော့2မိနစ် နဲ့ ရောက်ပါတယ်။ ပီးတော့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာလည်း စားသောက်ဆိုင်တွေ ဆိုတာ ပေါပေ့။ mini mart လည်း ရှိသေး။
မြန်မာလူမျိုးပိုင် ဟိုတယ် ဖြစ်ချင်း
ဘာသာစကားအခက်အခဲအတွက် စိတ်ပူစရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ နောက်ပီး ပိုင်ရှင်အကိုကြီးက အရမ်းကို ဖော်ရွေပီး အရမ်းကို သဘောကောင်းတဲ့အတွက် အခက်အခဲရှိရင်၊ အဆင်မပြေတာများရှိရင် ၊ ခရီးစဉ်နဲ့ ပတ်သက်ပီး သိချင်တာများ ရှိရင်လည်း အကူအညီတောင်း မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
Facilities တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်5စတား ဟိုတယ်အဆင့်နီးပါးကို လိုလေသေးမရှိ အကုန် ထည့်ပေးထားတာတွေ့ရမယ်။ အကြမ်းဖျင်းလေးပဲ ပြောပြမယ်နော်။
air conditioning, Ceiling fan, Free WiFi , Complimentary drinking water, Complimentary Tea / coffee, minibar နဲ့ snack, hair dryer, ညဝတ်အင်္ကျီ , လိုအပ်တာ ရှိရင် reception ကို ခေါ်ဖို့အတွက် telephone, Safety Box, movie လေးတွေကြည့်ဖို့ Flat TV နဲ့ channel အစုံပါတဲ့ cable, စားပွဲခုံ နဲ့ ထိုင်ခုံပါသေးတယ် ဆိုတော့ laptop ပါတဲ့သူတွေ ၊ အလုပ်ကိစ္စအတွက်လာတဲ့ သူတွေအတွက် အဆင်ပြေပီလေ။, sofa ထိုင်ခုံလေး နဲ့ စားပွဲ အသေးလေးတွေလည်း ထည့်ပေးထားတယ်။
ဝတ်ပီးသားအဝတ်တွေ ချိတ်လှန်းထားဖို့ နဲ့ နောက်နေ့အတွက် ဝတ်မယ့်အဝတ်အစားတွေကို ready ဖြစ်အောင် ချိတ်ပီးထားဖို့ wardrobe ပါပါတယ်။ slipper and foot massage tool လေးလည်းထည့်ပေးထားတယ်နော်။
bath towel / hand towel / face towel ထည့်ပေးထားတယ်။ Shower gel ၊ shampoo လည်း ထည့်ပေးထားတယ်။ free toiletries ပါနော်။ တစ်ခါသုံး သွားပွတ်တံ ၊ သွားတိုက်ဆေး ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ hand soap လက်ဆေး ဆပ်ပြာ ပါမယ်။ Bathtub ပါတယ်။ (Only deluxe Room)
24 hours front desk ရှိမယ်နော်။ wake up call service လည်း ပေးသေးတယ်နော်။
Set menu လေး လုပ်ပေးထားတယ်။ ကြိုက်တဲ့ set menu ကို မှာယူ လို့ရပါတယ်။
တကယ်လို့များ နောက်နေ့မနက်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ခရီးစဉ်ထဲ sunrise ကြည့်တာပါတဲ့သူတို့ ၊ early departure flight ဖြစ်နေတဲ့သူတို့ဆိုရင် breakfast မစားလိုက်ရမှာ မမှီမှာ ပူစရာမလိုဘူးနော် ပါဆယ် ယူသွားလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးသေးတယ်။
Superior Queen Room (2 person), Ground Floor Queen Room (2 person)
Superior Twin Room (2 Person), Superior Triple Room (3 person)
Outdoor Swimming Pool ပါရှိတယ်ဆိုတော့ကား ရေကူးတာ နှစ်သက်သူများ အကြိုက်တွေ့ပီလေ
နောက်ထပ် သတင်းကောင်းလေးတစ်ခုကတော့ minimum2nights stay ဆိုရင် airport pick up လုပ်ပေးသေးတယ်နော် ။ ချစ်သွားပီ
ကိုယ့်အစီစဉ် နဲ့ လာတဲ့သူများ ဟိုတည်သီးသန့်ယူပီး ဒီရောက်မှ သွားရေးလာရေးအတွက် ကားငှား ၊ tuk tuk ငှားမယ် ဆိုရင်လည်း Beyond Yangon ကနေ စီစဉ်ပေးသေးတယ်နော် ။
ကဲ လိုအပ်ချက် လစ်ဟာမှု တစ်ခုမှ မရှိတဲ့ ၊ facilities အပြည့်ရတဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ နေရသလို လုံခြုံမှု အပြည့်ရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးပိုင် Boutique လေးမှာမှ တည်းချင်သူများ : ဟိုတည်သီးသန့် မဟုတ်ပဲ Full Tour Package လေးနဲ့ လာရောက် လည်ပတ်ချင်ရင် များ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ ဖုန်းတွေ မေးလ်တွေကနေ စုံးစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါတယ်။
Website : : www.beyondyangon. com
email : : [email protected]. com
FB Page : : Beyond Yangon - Cambodia Rooms, Tours and Ticketing Service
Viber : : +85593704425
WhatsApp : : +85593704425
Line : : +85593704425
Telegram : : +85593704425
WeChat : : +85593704425
Pattay သွားမည့်သူများအတွက် တန်သွားအောင်...
တစ်နေ့တာခရီးစဉ်ကို ဒီနေရာလေးတွေလိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ စနေနှင့်တနဂ်နွေကြိုက်တဲ့ရက်-တစ်ရက်ထဲကို အစုံလိုက်ပေးမှာဖြစ်လို့ အခုပဲဖုန်းဆက်လိုက်ပါ။
+6682469347 ( V.I.P ) 1-4ဦးအများဆုံး
1-Silver Lake Pattaya
2-laser buddha Image Pattaya
3-nong nooch tropical garden
4-Pattaya view point
5-Sanctuary of Truth pattaya
ဘန်ကောက်မှာ နာမည်ကြီး Brand တွေ လျှော့ဈေး Duscount ချနေလို့ အမြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ သည်းခိုခန်း + ကား + ဧည့်လမ်းညွန် + စားစရိတ် free. တစ်ယောက်/တစ်ရက် ဘတ် ၂၅၀၀ အနည်းဆုံ (2ယောက်)
ဘန်ကောက်ရောက်လို့ကားငှါးလိုရင် လမ်းညွန်ငှါးလိုလျှင် သတိရလိုက်ပါ။ ဘန်ကောက်လမ်းညွန်မှ #ဘန်ကောက်လေယာဉ်ကွင်းကြိုပို့
#ဘန်ကောက်ကားဝန်ဆောင်မူ #ဘန်ကောက်အငှါးကား #ဘန်ကောက်လမ်းညွှန် #ဘန်ကောက်ဧည့်လမ်းညွန် #ဘန်ကောက်ဂိုဏ် #ဘန်ကောက်လမ်းပြ #ဘန်ကောက်ဈေးသက်သာသောတည်းခိုခန်း #ဘန်ကောက်ခရီးသွားဝန်ဆောင်မူ #ဘန်ကောက်လမ်းပြ #မြဘုရား #ဘန်ကောက်ဘုရားဖူး #ဘန်ကောက်ဈေးဝယ် #ဘန်ကောက်ဈေးဝယ်လမ်းညွှန် အတွက် အထူးဝန်ဆောင်မူပေးနေပါသည်။
#ထိုင်းဖုန်း #Viber #Line #Messenger
မြန်နှုန်းမြင့် ​ဈေးသက်သာအင်တာနက် ပေ့ခ်ျကက်
အရင်းအနှီးထုတ်စရာမလိုပဲလူတိုင်းမရှိမဖြစ်သုံးနေ တဲ့အင်တာနက်ပတ်ကေ့ခ်ျတွေကို အတူရောင်းချင်တယ်ဆိုရင် (Messanger)Chat...
ထိုငျးနိုငျငံ စီးပှားရေး အခွအေနေ သိပျ့မကောငျးတော့ပါ။
1.10.2019 မှာ ယူနီကုဒ်အသုံးပြုမှုကို တရားဝင်စတင်ပါတော့မယ်။
(မဖြစ်မနေ ပြောင်းမှ phသုံးရ အဆင်ပြေမှာမို့ ...
ကိုယ်တိုင်လုပ်နိူင်ဖို့ Save ထားဖို့နဲ့
ယူနီကုတ်ပြောင်းမထားရင် ဘာအခက်အခဲရှိမလဲဆိုတော့ အရင်က ဖုန်းအော်ပရေတာတွေ ပို့သမျှ SMS မက်ဆေ့တွေ အမှန်အတိုင်း မြင်နေရတာကနေ အမှန်အတိုင်းမမြင်ရတော့ဘူး ဆိုတာစဖြစ်လာပါမယ်။
လောလောဆယ်မှာ ဖေ့စ်ဘုတ် / မက်ဆင်ဂျာက Auto Convert ပေးနေလို့ ဇော်ဂျီနဲ့ရေးရေး ယူနီကုတ်နဲ့ရေးရေး ၂မျိုးလုံးဖတ်လို့ရနေပါသေးတယ်။
Facebook ကဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှမသိပါဘူး။
အကယ်၍ "ဇော်ဂျီကိုအထောက်ပံ့မပေးတော့ဘူး" သာ ဖြစ်လာခဲ့ရင်
"ငါ့ဖုန်းမြန်မာစာမမှန်တော့ဘူး" ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် ။
Android ဖုန်းတွေမှာ Unicode ကို ဘယ်လိုထည့်သွင်းကြမလဲ?
ဖုန်းအားလုံးနီးပါးမှာ Unicode က ပါလာပြီးသားပါ...
Settings> Control> Language> English နဲ့
Settings> Device> Font> FontStyle ကို System Font သို့မဟုတ် Default သို့မဟုတ်
မြန်မာ(Unicode) သို့မဟုတ် English (US) ထားပေးလိုက်ပါ။
Huawei EMUI 9.1 မှာ
Settings> System> Language and Input> Language and Region မှာ Language ကို English နဲ့
Region ကို Myanmar (Burma) ထားပါ။
Huawei EMUI 8 ဆိုရင်တော့ System> ဗမာ Unicodပြောင်းလိုက်ရင် System တခုလုံး မြန်မာလိုပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
(8 သမားများ 9.1ကိုမြှင့်မှအဆင်ပြေမှာပါ။)
ပြီးရင် zfont ကို playstore မှ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး pyidaung su font ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ (အဆင်မပြေပါက zfont ကို uninstall / install လုပ်ပါ။)
Vivo Funtouch OS9 မှာ
Settings> Language and Input မှာ
ဗမာ (Myanmar) ထားပါ။ (English ကို ရွေးရင် ဇော်ဂျီပဲဖြစ်နေဦးမှာပါ။)
အဲ့တာကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး Download> iTheme> Local> Font အောက်မှာထားပေးပါ။
Settings> Themes> Font> MiLanting(Default)
ရွေးပြီး Apply လုပ်ပါ။ ပြီးရင်စက်ကို Reboot လုပ်ပါ။
>Language & Input
> Add language
Oppo နဲ့ Realme ဖုန်းတွေမှာ
> Language and input
သို့မဟုတ် Language English ရွေးပြီး zfont ကို playstore မှဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ pyidaung su font ကို install လုပ်ပေးလိုက်ပါ။ (အဆင်မပြေပါက zfont ကို uninstall / install လုပ်ပါ။)
အကယ်၍ ယူနီကုတ်ပြောင်းဖို့ အခက်ခဲရှိသူများ ဒီမှာဝင်မေးလို့ရပါတယ် 👇
မိမိဖုန်းယူနီကုတ်ဖြစ်သွားပြီဆို သိသာတာက ဖုန်းအော်ပရေတာတွေ ပို့ထားတဲ့စာတွေ ဇောက်ထိုးတွေပြပါပြီ။
(အမှန်မြင်/ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာ အောက်မှာ ထပ်ရေးပေးပါမယ်။)
ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ Map apk ကိုဖွင့်ကြည့်ပါ။ လမ်းနံမည်တွေကို မြန်မာစာတွေနဲ့ ပြနေပါလိမ့်မယ်။ ဖတ်လို့ရနေပါလိမ့်မယ်။
👆ဒီအပေါ်ကလင့်ကိုနှိပ်ပြီး စာဖတ်ကြည့်ပါ။ ဖတ်လို့ရတယ်ဆို သင့်ဖုန်းယူနီကုတ်ဖြစ်သွားပါပြီ။
ဖုန်းကယူနီကုတ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကီးဘုတ်ကလည်း ယူနီကုတ်ကီးဘုတ်နဲ့စာရေးမှအမှန်မြင်ရမှာပါ။
လက်ရှိသုံးနေတဲ့ကီးဘုတ်ထဲက ဇော်ဂျီရွေးထားတာကိုဖြုတ်ပြီး ယူနီကုတ်ကိုအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ။ (လုပ်တတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့)
အရင်ကီးဘုတ်အဟောင်းကို uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ Playstore ထဲမှာ ယူနီကုတ်ကီးဘုတ်တွေအများကြီးရှိတဲ့ထဲကမှ နှစ်သက်ရာဒေါင်းယူပါ။
Manic Keyboard 👇
Gboard Keyboard 👇
ဒါဆိုရင် စာဖတ်ဖို့ရော စာရေးဖို့ရော ပြည့်စုံသွားတဲ့ ယူနီကုတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်သွားပါပြီ။
လောလောဆယ်မှာဖုန်းအော်ပရေတာတွေက မက်ဆေ့တွေကိုဇော်ဂျီနဲ့ပဲပို့နေတုန်းဆိုတော့ သင့်ဖုန်းကလည်း ယူနီကုတ်ပြောင်းထားတော့ အမှန်မြင်ရမှာမဟုတ်သေးပါဘူး။
ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး Defult ထားထားပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင် ဇော်ဂျီ ယူနီ မည်သည့် sms မက်ဆေ့မဆိုဖတ်လို့ရသွားပါပြီ။
ယူနီကုတ်ဖုန်းဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ အရင်ကဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ ဖုန်း Contact တွေ သီချင်းနံမည်တွေကိုလည်း အမှန်ဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။
ဖုန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကို ယူနီကုတ်အဖြစ်ပြောင်းဖို့က အောက်မှာဒေါင်းလုတ်ဆွဲပါ။ 👇
ဇော်ဂျီနဲ့ရေးထားတဲ့ ဖုန်းကွန်တက်တွေကို ယူနီကုတ်ပြောင်းဖို့ကဒီမှာပါ 👇
Uni Contact Conerter
ဒီအောက်က ဗီဒီယိုလေးကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ဘယ်လိုအသုံးပြုရသလဲဆိုတာကိုကြည့်နိုင်ပါတယ်။👇 Viber, Whatsapp, WeChat စတာတွေအတွက်...
Zawgyi to Unicode Video
ဖေ့စ်ဘုတ် မက်ဆင်ဂျာတွေက up to date ဖြစ်မှ ဇော်ဂျီရော ယူနီကုတ်ရော ၂မျိုးလုံးကိုအမှန်ဖတ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပါ။ Update မဖြစ်ရင် Playstore မှတဆင့် Update မြှင့်တင်ပါ။
လက်ရှိမှာအဆင်ပြေနေတာပဲ မပြောင်းရင်ဘာဖြစ်မလဲဆို ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
ယူနီကုတ်ရော ဇော်ဂျီရော ၂မျိုးလုံးဖတ်လို့ရနေတဲ့ ဘာလာလာဒေါင်းတဲ့အနေအထားက ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
အဆင်ပြေ ကြပါစေ ခင်ဗျာ
Credit- Kaung Paing
ဘန်ကောက်မှာ Brand ပေါင်းစုံကို ပက်စက်စွာ 80% off တဲ့
Promotion ကတော့ 15 May မှ 26 May 2019 အထိ
Central Plaza Lardprao မှာနော်
(၁၀) ပါးမြောက်ထိုင်း ရာမာန် မင်းဆက်
ဘုရင်မင်းမြတ်ကြီး မဟာ ဗာဂျီယာ လောင်ကွန်းသက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။
2019 ၅ လပိုင်း....
၄.၅.၆.. သုံးရက် မြဘုရား ပိတ်မည်။
နန်းတော်နှင့် မြဘုရား အနီး မှ
လမ်းများ အားလုံးလဲ ပိတ်ပါသည်။
Photos from Vichan Asia Travel & Tour's post
စာဖတ်လို့ ပိုက်ဆံ မရပေမယ့် ပိုက်ဆံရှာဖို့
၁ဝ နှစ်စာ အတွေ့အကြုံကို
ကြိုရချင်ရင် အတွေးအခေါ် ရှိတဲ့
ရှုံးနိမ့်ခဲ့ဖူးသူဆီက သင်ယူ လေ့လာပါ။
မရှိစေချင်ရင် ရွှေထက် တန်ဖိုးကြီးသော
ကိုယ့်အတ္တနဲ့ မာနတွေ လျှော့ချပါ။
ဗဟုသုတ ပွားချင်ရင် စာဖတ်ပါ။
Credit: Original uploader.
၃။ အကျိုးစီးပွားပျက်ပြားစေတဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကနေ ရုန်းထွက်ပါ။
၅။ ရင်ဆိုင်စရာရှိတာတွေကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရင်ဆိုင်ပါ။
၇။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုရှိပါ။
၈။ မပျော်တဲ့အလုပ်ဆိုရင် ပြန်ဆန်းစစ်ပါ။
၁ဝ။ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်အလှကို မြင်ပါ။
၁၁။ ချစ်တဲ့စကားကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောပါ။
၁၂။ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပါ။
၁၃။ ချစ်ခင်သူတွေကို ဂရုစိုက်ပါ။
၁၆။ ချစ်တဲ့သူတွေကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားပါ။
၁၉။ ခံတွင်းကျန်းမာရေးကို ဂရုစိုက်ပါ။
၂ဝ။ အဘိုးအဘွားတွေကို စိတ်ရှည်လက်ရှည်အဖော်ပြုပေးပါ။
၂၄။ အစပြုခဲ့တဲ့အလုပ်တိုင်းကို အဆုံးသတ်အထိတာဝန်ယူပါ။
၂၅။ အမြဲအမှတ်ရစရာ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတစ်ခု ဦးဆောင်ပြုလုပ်ပါ။
၂၆။ အရာရာကို ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်ပါ။
၂၇။ ရှောင်လွှဲမရတဲ့ခွဲခွာခြင်းတွေကို နားလည်လက်ခံပါ။
၂၈။ သားသမီးတွေနဲ့ အတူကစားပါ။
၃ဝ။ နည်းပညာတွေကို လေ့လာပါ။
၃၁။ စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ဖယ်ရှားပါ။
၃၂။ အပေါ်ယံဟန်ဆောင်မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၃၃။ ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ အချိန်ဖြုန်းပါ။
၃၄။ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူကို ရိုသေပါ။
၃၅။ ကျေးဇူးစကားကို အချိန်မဆွဲဘဲ ချက်ချင်းပြောပါ။
ကဲ... စာစောင်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေဖို့ သူငယ်ချင်းတွေကို mention ခေါ်ရင်း သင့် wall ပေါ်လည်း SHARE လိုက်ပါဦးနော်။
Memories of SP James Good Time
ติดทัวร์โปร - Pro Nidnoi Travel
411 หมู่บ้านไทม์โฮม ซอนอ่อนนุช40 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
บริษัท นิดหน่อย ทราเวล จำกัด ใบอนุญาตเปิดบริษัท เลขที่ 11/08164
แค้มปิ้ง แบกเป้ เดินทาง
มิตรภาพ เริ่มจาก การเดินทาง
Next Travel Co., Ltd.
Worldwide Air Tickets, Accommodations, Visa Services, Private customized tours, Package Tours, Cruise etc.
โครงการเดอะซิงโครไนซ์ เลขที่ 9/9 ซอยรัชดาภิเษก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยข
เที่ยวเกาหลีหลากหลายเส้นทาง ติดตามโปรโมชั่นพิเศษ ทัวร์เกาหลีไฟไหม้
บริการทัวร์ส่วนตัว 6-8 ท่าน เลือกโปรแกมได้เอง ไม่ชะโงกทัวร์
21 Krungthonburi Rd., Bangyirue, Thonburi
บริษัท เอี่ยมทัวร์ แอนด์ทรานสปอร์ต จำกัด ทัวร์ดี ตั้งแต่ปี 2517
รับจัดทัวร์ในประเทศ กับ ProTeamthail
รับจัดทัวร์หมู่คณะภายในประเทศ,กิจกรรม Team building,Walk rally,Car rally , Sport day ,Event , Organize
Taxisabai isaThailand airport taixi service both Suvarnabhumi Airport BKK and Donmuang Airport (DMK) drive you to your resident convenient and safe.
Private Executive Bangkok Airport Transfers
Need an airport transfer from Bangkok's Suvarnabhumi International Airport or Don Mueang International Airport to your hotels? Friendly family business..
เที่ยวยุโรป By Newgens
65/98 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว
บริการรถเช่าพร้อมคนขับรถคนไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฝรั่งเศส และอิตาลี
Our service provide the Van car service in Bangkok with professional chauffeur can speak English and many experience in service. We have3types of vehicle